Home Wararka (Deg Deg) Wasiir ka tirsan maamul Goboleedka Galmudug oo is casilay
(Deg Deg) Wasiir ka tirsan maamul Goboleedka Galmudug oo is casilay
Wasiirka Qorsheynta Dowlad Goboleedka Galmudug Cabdinaasir Geelle ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkiisa.
Wasiirka Qorsheynta ayaa sheegay inuu is casilaadiisa u gudbiyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor isla markaasna uu dib faahfaahin uga bixin doono sababta uu isku casilay.
Cabdinaasir Geelle ayaa noqonaya Wasiirkii labaad ee iska casila Galmudug, waxaa horay sanadkii hore is casilay Wasiirkii Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi.
Halkaan hoose ka akhriso qoraalka is casilaada oo uu soo dhigay bartiisa Facebook
Waxaan maanta u gudbiyay Madaxweynaha Galmudug warqadii aan iskaga casilay xilkii Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Horumarinta Dhaqaalaha iyo Iskaashiga Caalamiga ee Galmudug.
Waxaan gadaal kasoo faahfaahin doona sababta keentay iscasilaadeyda oo aan ku faahfaahin doono shir jaraaid.
Waxaan si guud ugu mahadcelinayaa dhamaan heyadaha Dowladda Galmudug￼ iyo shacabkeeda. Sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa howl wadeenada Wasaaradda Qorsheynta, Horumarinta Dhaqaalaha iyo Iskaashiga Caalmiga sida hagar la’aanta eey iila shaqeeyeen.
Previous articleTaiwan and Somaliland Build Closer Ties Amid Criticism from China
Next articleRooble oo kulan la yeeshay xubnaha Beesha Caalamka
Contact us: muqdishonli[email protected]
Abiy Ahmed oo dib ugu laabtay Furrimaha Dagaalka & waddo muhiim...
DAAWO: Kheeyre & Farmaajo oo Dhalinyaradii ay u direen Eretria oo...